၃၀၀၀၀ ဘီစီမှ ကလေးတစ်ယောက်၏ ဒိုင်ယာရီ | Curiosity Science Magazine
August 12, 2016 · by Thar Htet Aung	· in Philosophy and Formal Science, Space.	·
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက သိတတ်စအရွယ်မှာ ကိုယ်ဘယ်မှာနေနေတယ်ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်အသိချင်ဆုံးထဲက တစ်ခုပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်အဖေကို သွားမေးခဲ့တယ်။ အဲ့တော့ အဖေကပြောတယ်။ မန္တလေးမြို့တဲ့။ အဲ့ဒါတော့ ကျွန်တော်သိတာပေါ့။ အဲ့ဒီ မန္တလေးမြို့ကကော ဘယ်မှာရှိတာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံတဲ့။ အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကကော ဘယ်မှာရှိတာလဲလို့ ထပ်မေးရတယ်။ အဲ့တော့ အဖေက ကမ္ဘာ့မြေပုံဝယ်ပေးတယ်။ အော်…. အဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကကော ဘယ်မှာရှိနေသလဲလို့ ထပ်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။ အဖေ့ကိုမေးတော့ စကြဝဠာထဲမှာ နေကို ပတ်နေတာတဲ့။ အဲ့တော့ နေကို ကျွန်တော်မော့ကြည့်မိတယ်။ ဒီအရာတွေကို လူတွေက ဘယ်လိုလုပ်များ သိလာပါလိမ့်။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော့်ဆီမှာ ဖုန်းမရှိဘူး။ အင်တာနက်မရှိဘူး။ မီးကလဲ မမှန်တော့ တီဗီလဲ ညတိုင်းမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ အဲ့တော့ ညညဆို ကျွန်တော် ကောင်းကင်ပေါ်ပဲမော့ကြည့်တယ်။ အခု ကျွန်တော် facebook က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးသလို သူတို့နဲ့ ကျွန်တော် ရင်းနှီးတယ်။ သူတို့က ကြယ်တွေ။ ဒီကြယ်တွေဟာ ဘာတွေလဲ။ လမ်းထဲက ကျွန်တော့်ထက် ကြီးတဲ့ အစ်ကိုကြီးတွေကို မေးကြည့်တယ်။ “သူတို့က ကောင်းကင်က အလင်းရောင် အစက်ကလေးတွေပေါ့ ညီရာ” တဲ့။ အဲ့ဒါတော့ ကျွန်တော်သိတာပေါ့။ ကျွန်တော်သိချင်တာက အဲ့ဒီကြယ်တွေက ဘာတွေလဲ။ သူတို့ကို ဘာနဲ့လုပ်ထားသလဲ။ သူတို့က ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ။ ကျွန်တော် အဲ့ဒီ အစ်ကိုကြီးတွေအတွက် ဝမ်းနည်းမိတယ်။ ဒီကြယ်တွေအတွက် ပိုပြီး နက်နဲတဲ့ အဖြေတစ်ခု ရှိကိုရှိရမယ်။ ဒါကို ကျွန်တော့်အဖေသွားပြောတော့ ကျွန်တော့်အဖေက ကျွန်တော့်ကို စာကြည့်တိုက်ကဒ် လေးတစ်ကဒ် ပေးခဲ့တယ်။ Jefferson Center ဆိုတဲ့ စာကြည့်တိုက်။ ဟုတ်ပြီ။ ဒါဟာ ငါ့အတွက် နေရာမှန်ပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ လမ်းဘေးကနေ စာကြည့်တိုက်ထဲ စရောက်ဖူးခဲ့တယ်။
တစ်ခါက ဗြိတိန် သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆာ အာသာ အက်ဒင်တန်(Sir Arthur Eddington) ဟာ သူ့ကောင်မလေးနဲ့ အတူ ညပိုင်း ချိန်းတွေကြတယ်။ အဲ့မှာ သူ့ကောင်မလေးကပြောတယ်။ “ကြယ်တွေက လှလိုက်တာနော်၊ သူတို့ လင်းလက်နေတာ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတာပဲ” တဲ့။ အဲ့မှာ အက်ဒင်တန်ကပြန်ပြောတယ်။ “အင်း ဟုတ်တယ်။ သူတို့ ဘာ့ကြောင်း လင်းလက်နေလဲဆိုတာကိုသိတာ အခုလောလောဆယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငါတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်” တဲ့။
ကျွန်တော် စာကြည့်တိုက်ရောက်တော့ ကြယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပေးပါလို့ စာကြည့်တိုက်မှုးကို ပြောရတယ်။ အဲ့တော့ စာကြည့်တိုက်မှုးက ပြုံးပြီး ကျွန်တော့်ကို စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်ပေးတယ်။ “The Universe” တဲ့။ ကျွန်တော်စာအုပ်ကို စလှန်တဲ့အချိန်မှာ အသက်တောင် မရှူမိပါဘူး။ ကြယ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ နေမင်းကြီးလို အရာတွေပဲ၊ သူတို့ဟာ အရမ်းဝေးနေတာတဲ့။ နေဟာလဲ ကြယ်တစ်လုံးပဲ အရမ်းနီးနေတာပဲ ရှိတာတဲ့။ ကျွန်တော် အရမ်းသဘောကျသွားတယ်။ အဲ့ဒီနေကို ကျွန်တော်တို့ နေနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက လှည့်ပတ်နေတာတဲ့။ ဘာကြိုးနဲ့မှလဲ ဆက်သွယ်မထားပါဘူး။ လေထဲမှ အလိုလို လှည့်ပတ်နေတာတဲ့။ ကျွန်တော် အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ အရမ်းလဲ သဘောကျသွားတယ်။ အဲ့ကတည်းကစပြီး ကျွန်တော်ဟာ သိပ္ပံအကြောင်းအရာတွေကို ရင်သက်ရှုမောစွာနဲ့ မက်မက်မောမော ဖတ်တော့တယ်။
သိပ္ပံပညာရပ် မထွန်းကားခင် ခေတ်အခြေအနေကို မှန်းဆကြည့်ပါ။ စာကြည့်တိုက်တွေ မရှိသေးခင်အချိန်ကို မှန်းဆကြည့်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀,၀၀၀ လောက်ကို မှန်းဆကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်လိုပဲ ဒီကြယ်တွေ ကမ္ဘာတွေ အကြောင်း သိချင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်တော့ ရှိခဲ့မှာပဲ။ သူဟာလဲ အခုကျွန်တော့်လို သိလိုစိတ်ပြင်းပြခဲ့မှာပဲ။ အဲ့ဒီခေတ်အခါက လူတွေဟာလဲ အခုခေတ်အခါကလူတွေလို Curiosity ပြင်းပြခဲ့မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် တီထွင်ဆန်းစစ်မှုတွေမရှိသေးဘူး။ လေ့လာစူးစမ်းမှုတွေ ခရီးမရောက်သေးဘူး။ အဲ့ဒါဟာ Homo ဆိုတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ ကနဦးအစပေါ့။ မီး ဆိုတဲ့အရာကို စတင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်။ သူတို့ဟာ ဘယ်လိုများနေခဲ့ကြပါလိမ့်။ ကြယ်တွေကို ဘယ်လိုများ တွေးထင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ သဘာဝတရားကြီးကို ဘယ်လိုများ နားလည်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ တစ်ခါတစ်လေ… ကျွန်တော် ရွှင်ပြစွာနဲ့… အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဒီလိုတွေးထင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့မှာပဲလို့ မှန်းဆမိတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ သစ်သီးသစ်ဖုတွေစားတယ်။ သစ်ရွက်တွေလဲ စားတယ်။ သေနေတဲ့ တိရိစ္ဆာတွေကိုလဲ စားတယ်။ တစ်ချို့ကိုတော့ ဒီတိုင်းတွေ့တယ်။ တစ်ချို့ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ သတ်လိုက်ရတယ်။ ဘယ်အစာတွေက ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိပြီး ဘယ်အစာတွေကတော့ စားလို့ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို သေစေနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကလေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုအစားအစာတွေ မစားဖို့ ကျွန်တော်တို့က တားကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အမဲလိုက်ပြီဆိုရင်လဲ သတိထားရတယ်။ တစ်ချို့ တိရိစ္ဆာန်တွေက သန်မာကြတယ်။ ဒီလိုတိရိစ္ဆာန်တွေကိုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ အချွန်အထက်တွေ များများသုံးပြီး လိုက်ရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ထဲကလဲ အသတ်ခံရတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို စားကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲ သူတို့ကို စားကြတယ်။ အပြန်အလှန်ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ သားရည်တွေခွာပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခြုံထားရင် ညပိုင်း အချမ်းဒဏ်သက်သာတယ်။
အသားတွေက ကြာရင် စားလို့မကောင်းတော့ဘူး။ သူတို့ ခရမ်းရောင်သမ်းလာတက်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အဖြူရောင် မှိုလိုလိုဟာလေးတွေ ကပ်ပေါက်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်က ဒီဖြစ်စဉ်ကို ပုပ်သိုးတာဆိုပြီး နာမည်ပေးထားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အစားအသောက်တွေကို သိုလှောင်ရတယ်။ တစ်ချို့အရာတွေကို တိရိစ္ဆာန်အရေခွံနဲ့ပတ်ပြီး သိမ်းထားရတယ်။ နောက်စားဖို့ အတွက်။ အကုန်လုံးကို အခုစားလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဟာ နောက်ကျ အစာငတ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ စည်းမျဉ်းတွေပဲ။ စည်းမျဉ်းတွေဟာ မြင့်မြတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိုက်ကိုလိုက်နာရမယ်။
တစ်နေ့မှာ မုန်တိုင်းတစ်ခုကျရောက်လာတယ်။ ကောင်းကင်က တိမ်တွေထဲမှာ အလင်းရောင်တွေ လက်ကနဲ လက်ကနဲဖြစ်တယ်။ အသံတွေဟာလဲ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် မြည်ဟီးတယ်။ မိုးပေါ်ကနေ ရေစက်တွေ ကျလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို ကြောက်တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြီး ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိကြဘူး။ အင်း… ကောင်းကင်ပေါ်မှာနေတဲ့ တန်ခိုးတိက္ကမကြီးမားတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်က အရမ်းဒေါသဖြစ်နေလို့ပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်က အပြစ်များ လုပ်မိလို့လား။ ကျွန်တော်တို့ အဖြေရှာရတယ်။
တစ်ခါက ကောင်းကင်ပေါ်က အလင်းတန်းကြီးဟာ မြေပြင်ပေါ်ကို ကျလာတယ်။ အဲ့ဒီမှာ မီးစလောင်တယ်။ အဲ့ဒီမီးဟာ ကျွန်တော်တို့ကို နွေးထွေးစေတယ်။ အရမ်းကြီး ကပ်သွားရင်လဲ လောင်ကျွမ်းစေတယ်။ သူ့မှာ အနံ့တစ်မျိုးရှိတယ်။ သူဟာ အစားအသောက်တွေကို စားသုံးတယ်။ သစ်ပင်တွေ သစ်ရွက်တွေကို စားသုံးတယ်။ အစာကုန်တဲ့အချိန်မှာ သူဟာသေသွားတယ်။ ပျောက်သွားတယ်။ အမဲရောင် မစင်အမှုန့်လေးတွေသာ ထားခဲ့တယ်။ သူဟာ အစာမစားပဲနဲ့ နေရာက မရွေ့တတ်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်ဟာ အရမ်းကို ရဲရင့်တဲ့ အကြံတစ်ခုရတယ်။ အဲ့ဒီမီးကို ဖမ်းမယ်တဲ့။ ဖမ်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်မွေးမြူမယ်ပြောတယ်။ သစ်ကိုင်းရှည်တွေနဲ့ ဖမ်းထားတယ်။ သူဟာ အဲ့ဒီ သစ်ကိုင်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းနှေးတယ်။ သူလမ်းလျှောက်တာ တစ်ချောင်းကုန်ခါနီးရင် နောက်တစ်ချောင်းနဲ့ ဒီဘက်က ခံထားပေးရတယ်။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ကို နွေးထွေးစေတယ်။ သူဟာ အဲ့ဒီကောင်းကင်ပေါ်က ဒေါသထွက်တတ်တဲ့ သူနဲ့ ဘယ်လိုများ ပတ်သက်မှုရှိပါသလဲ။
အဲ့ဒီမီးဟာ ညညဆို ကျွန်တော်တို့ မြင်နိုင်ဖို့အလင်းရောင်ပေးတယ်။ အကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကတော့ သားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေဟာ ဒီမီးကို ကြောက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ညညဆို စိတ်ဖြောင့်လက်ဖြောင့် အိပ်ရတယ်။ ဒီမတိုင်ခင်က ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ချို့ဟာ အစားခံရတတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မီးကို စောင့်ရှောက်တယ်။ မီးဟာလဲ ကျွန်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်တယ်။
ကောင်းကင်ဟာ တော်တော်အရေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို လွှမ်းခြုံထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ စကားပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ညညဆိုရင် မြေပြင်ပေါ်လှဲပြီး ကောင်းကင်ပေါ်က အစက်ကလေးတွေကို ကြည့်ကြတယ်။ တစ်ချို့ အစက်ကလေးတွေကို လိုက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ ပုံတစ်ချို့ပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ထက် ပုံတွေကိုပိုပြီး မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ သူက အဲ့ဒီ ကြယ်ပုံလေးတွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ နာမည်တွေ ပေးထားတယ်။ ညညဆို ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ အဲ့ဒီ ကြယ်ပန်းချီကားတွေအကြောင်း ပုံပြင်လေးတွေ ထိုင်ပြောကြတယ်။ ခြင်္သေ့တွေ၊ ကျားတွေ၊ ဝက်ဝံတွေ၊ အမဲလိုက်သမားတွေ။ ဒီပုံတွေက ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောဖူးတဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်က ဒေါသထွက်လေ့ရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ ပုံတွေများလား။ ဒါမှမဟုတ် သူက ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေလား။ ကျွန်တော် သိချင်မိတယ်။
များသောအားဖြင့် ကောင်းကင်က ပုံရိပ်တွေက ပြောင်းလေ့မရှိပါဘူး။ ဒီကြယ်ပန်းချီကားတွေပဲ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် အမြဲတွေ့ရတယ်။ လမင်းကြီးဟာ ဘာမှမရှိရာကနေ ငွေရောင် အလုံးတစ်လုံးအဖြစ်တိုးလာတယ်။ ပြီးရင် ဘာမှမရှိတာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လျော့သွားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လက်သည်းခွံပုံဖြစ်တယ်။ အခုလို လမင်းကြီးတစ်ခုခု ပြောင်းလဲပြီးတိုင်း မိန်းမတွေဟာ သွေးတွေထွက်ကြတယ်။ တစ်ချို့ အဖွဲ့တွေက အဲ့ဒီ လမင်းပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိတ်လိုက်ခြင်းအပေါ်မှာ စည်းမျဉ်းတွေထုတ်ထားတယ်။
ကြယ်တွေက အရမ်းဝေးတဲ့နေရာတွေမှာ တည်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သစ်ပင်ပေါ်တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်ပေါ်တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေမယ့် သူတို့ဟာ နည်းနည်းလေးမှ ပိုနီးမလာဘူး။ တိမ်တွေရွေ့လာရင် တိမ်တွေဟာ ကြယ်တွေကို ဖုံးသွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကြယ်တွေဟာ တိမ်တွေရဲ့နောက်မှ ရှိရမယ်။ လမင်းဟာလဲ တစ်ဖြည်းဖြည်းရွေ့နေရာကနေ ကြယ်တွေကို ဖုံးကွယ်သွားလေ့ရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လမင်းဟာလဲ ကြယ်တွေရဲ့ ရှေ့မှာ ရှိလိမ့်မယ်။ ကြယ်လေးတွေဟာ တစ်လက်လက် လင်းနေတယ်။ အရမ်းလှတယ်။ အများကြီးပဲ။ ကောင်းကင်ကြီးအနှံ့ပဲ။ ဒါပေမယ့် ညအခါမှသာ ပေါ်လာလေ့ရှိကြတယ်။ သူတို့ဘာတွေလဲဆိုတာ ကျွန်တော် သိချင်မိတယ်။
တစ်ညမှာ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဟာ မီးဖိုဘေးမှာ ကြယ်တွေကို မော့ကြည့်ရင်း ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြတယ်။ ရုတ်တရတ် ကျွန်တော် အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်။ ကြယ်တွေဟာလဲ မီးတွေဖြစ်ရမယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ခြားအဖွဲ့ကလူတွေရဲ့ မီးဖိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြယ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မီးဖိုတွေထက်နည်းတဲ့ အလင်းရောင်တွေပေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ အဝေးကြီးမှာ တည်ရှိလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီမှာ တစ်ယောက်က ထမေးတယ်။ “ဒါပေမယ့်ကွာ…. ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုလုပ်မီးဖိုတွေ ရှိနိုင်ပါမလဲ။ သူတို့က ငါတို့အပေါ်ကို ပြုတ်ကျလာမှာပေါ့။” တဲ့။
အင်း… ဒီထောက်ပြချက်က ကောင်းတာပဲ။ ကျွန်တော် အခက်တွေ့သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲက အခြားတစ်ယောက်မှာလဲ အတွေးတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကြီးကို အရမ်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ သူရဲ့ အရေခွံကြီးခြုံထားတယ်။ အဲ့ဒီအနောက်မှာ အရမ်းလင်းလက်နေတဲ့ မီးဖိုအကြီးကြီးရှိတယ်။ အရေခွံကြီးမှာ အပေါက်တွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီ အပေါက်လေးတွေက တစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ဒီမီးဖိုကြီးရဲ့ အလင်းရောင်တွေကို အစက်ကလေးတွေအဖြစ်မြင်ရတယ်။ အဲ့ဒါတွေဟာ ကြယ်တွေပဲ။ ဒါလဲ အလွန်ကောင်းတဲ့ အတွေးတစ်ခုပဲ။
တစ်ချို့ကြယ်တွေက လျှောက်သွားလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ကို လပေါင်းအတော်ကြာကြာ စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ နေရာအနည်းငယ်ရွေ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရေခွံပေါ်က အပေါက်တွေဆိုတဲ့ အတွေးဟာ မမှန်နိုင်ဘူး။ အပေါက်ဟာ အပေါက်ပဲ။ မရွေ့နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တွေးတဲ့ တစ်ခြားမီးဖိုတွေဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အခြားအဖွဲ့တွေဟာ ဒီမီးဖိုတွေကို သယ်ပြီး ခရီးသွားနေတာဖြစ်မယ်။
တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ ကျွန်တော် လျှောက်တွေးမိတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ထင်သလို မီးဖိုတွေ အရေခွံအပေါက်တွေ မဟုတ်ပဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေနားလည်ဖို့ အတွက် အရမ်းရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုများ ရှိနေမလား။ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ သိနိုင်စွမ်းရှိလာမလား။
တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် ပက်လက်လှန်ပြီး ကြယ်တွေကို အပြည့်အဝထိုင်ကြည့်တယ်။ ကောင်းကင်ကြီးပဲ။ အဲ့ဒီ ကောင်းကင်ကြီးထဲကို ကျွန်တော်ပြုတ်ကျသွားပါစေ ဆုတောင်းတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ကြယ်တွေဟာ အခြားအဖွဲ့တွေရဲ့ မီးဖိုတွေဆိုရင် ကျွန်တော် တစ်နေ့နေ့ သူတို့ဆီသွားလည်ပတ်ချင်တယ်။ တစ်နေ့တို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်တွေ ရောက်လောက်မလားလို့ ကြောက်ခမန်းလိလိတွေးပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ သူတို့ အမှန်တရားကို အတိအကျသိလာနိုင်တဲ့တစ်နေ့ရှိလာနိုင်မလား။
ကျွန်တော် အမှန်တရားကို သိချင်လွန်းလို့ ဆုတောင်းမိတယ်။ မသိရတာကို ကျွန်တော် မနှစ်သက်ဘူး။
အဲ့လိုတွေးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ တော်တော်သနားစရာကောင်းတာပဲလို့ တွေးမိမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ဒီ အဆင့်ကနေ အမှန်တကယ်ဖြတ်သန်းလာတာပါ။ တောကြီးမျက်မဲထဲမှာ စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦးအလား ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်နဲ့ သဘာဝတရားကြီးထဲမှာ ကြီးပျင်းလာခဲ့ကြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကလာတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်ကိုရောက်နေတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘာ့ကြောင့် တည်ရှိနေရတာလဲ။ ဒီမေးခွန်းပေါင်းများစွာဟာ လူသားတို့ကို ခေတ်အဆက်ဆက် ပဟေဋိ ထုတ်ခဲ့တာပါ။ အခု ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမေးခွန်းများကို ဖြေနိုင်ဖို့ လမ်းစလေးပေါ် စပြီးတက်လှမ်းနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ခရီးတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးသည်။ ဒီခရီးလမ်းမှာ သိပ္ပံ ဟာသင့်အတွက် အကောင်းဆုံး လမ်းပြဖော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
“ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာကြီးထဲက သာမန်အဆင့်ရှိတဲ့ ကြယ်တစ်လုံးကို ပတ်နေတဲ့ ဂြိုဟ်ငယ်လေးတစ်လုံးပေါ်က အဆင့်မြင့် မျောက်မျိုးနွယ်စု တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာကြီးအကြောင်းကို လေ့လာနေပါပြီ။ ဒီအချက်ဟာ အရမ်းအားရဖွယ်ကောင်းပါတယ်။” – စတီဖင်ဟော့ကင်း
Ref; Cosmos by Carl Sagan
← နတ်ပ်ကျွန်းဂြိုဟ်ပတ်လမ်း အလွန်တွင် ထူးဆန်းသော အရာတစ်ခုအား တွေ့ရှိ
အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် (သို့ မဟုတ်) ရီလေတီဗတီ သို့ခြေလှမ်းစတင်ခြင်း – အပိုင်း (၁) →